Usathukile osinde engozini enyantisa igazi okubhubhe kuyo abangu-17 | Scrolla Izindaba
Usathukile osinde engozini enyantisa igazi okubhubhe kuyo abangu-17
Osinde engozini yomgwaqo edlule nemiphefumulo engu-17 ku-N1 Highway ngase-Mookgophong e-Limpopo uNtebaleng Letsele uthi asikasuki emqondweni wakhe isithombe sengozi enyantisa igazi.
UNtebaleng oneminyaka engu-32, ugibele ibhasi elithwala abantu abangu-22 ebelisuka ePitoli liya e-Polokwane ngoLwesibili. Uthe uhambo lwakhe belunokuthula kwaze kwaba ngenkathi i-SUV ishayisana nebhasi ngemuva kokuthi omunye umshayeli ehluleke ukulawula imoto yakhe – okubikwa ukuthi kungenxa yokuqhuma kwesondo.
Ngemuva kokuphuma esibhedlela i-FH Odendaal e-Mokopane, uNtebaleng ukhulume ne-Scrolla.Africa wachaza le ngozi njengesimo “esenzima asinde kuso ekufeni” esiyohlala sizulazula emigudwini yemicabango yakhe.
“Bekungathi ngibuka ifilimu ehlasimulisa umzimba kodwa bekwenzeka ngempela futhi bekuthusa. Angikaze ngiyibone into efana naleyana empilweni yami ngaphandle uma ngikubuka kumafilimu. Kuyimpicabadala ukuthi ngisinde kanjani,” esho.
UNtebaleng uthe ngaphambi kokuthi ibhasi livuthe amalangabi, uthandazile ecela ukuthi asinde okuthe ngesikhathi kukhona ozobasiza ngokuphula amawindi, imithandazo yakhe yaphenduleka.
“Besihlakazeke ngaphakathi ebhasini futhi sivalelekile. Kodwa ngakhululeka ngenkathi ingelosi enomusa ifika kithi.”
UNtebaleng, osebenza e-Centurion, usalulama emlenzeni ekhaya lakhe elisesigodini sase-Thakgalang ngase-Morebeng.
Kuvulwe icala lokubulala ngokungenhloso ngemuva kwengozi enyantisa igazi.
Abashonile bayiswe emakhazeni ase-Bela-Bela nase-Mokopane, lapho okuzokwenziwa khona ulibofuzo kumalungu omndeni wabo ngoLwesine.
UNgqongqoshe wezokuThutha nokuPhepha koMphakathi uMavhungu Lerule-Ramakhanya uthe ukhathazekile ngokuthi izingozi eziningi ezibikwe ku-N1 zenzeka ngesizathu esifanayo.
“Sesikuqhaphele ukuthi izingozi eziningi ezenzeka kulo mgwaqo zinembangela efanayo,” kusho uLerule-Ramakhanya.
“Kuthiwa abashayeli bashayela budedengu futhi basuke bekhathele. Izimoto zivame ukuhamba ngesivinini ngenkathi ezinye zingekho esimweni sokuba emgwaqeni. Kuyasiphazamisa kakhulu lokhu ngoba sihlale sishumayela ngokuphepha emgwaqeni kodwa kubukeka sengathi imiyalezo yethu iwela ezindlebeni ezingezwa.